मेरो खुशी Archives -
दाङ, १ फागुन । घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ काठेकोहलमा रहेको सरस्वती माध्यमिक विद्यालयकी प्रधानाध्यापक बसन्ता पौडेल ५२ पुगिन् । ५२ बर्षको लामो जीवनमा पौडेलसँग खुशी र दुःखका अनेक क्षण … Read More
क्रिकेट टिमको क्याप्टेन …
दाङ । म नेपाली भए पनि भारतमै जन्मिए । बुबाले भारतमै लामो समय काम गरेका कारण मेरो बाल्यकाल पनि भारतमै बित्यो । त्यही क्रममा इण्डियामै हुर्के, इण्डियामै पढे । स्कूलमा … Read More
इण्डोनेसियामा अवधारणा प्रस्तुत गर्दा…
बालाराम खड्का दाङ,१६ माघ । सरल बहुप्रतिभाका धनी, जो अनवरतरुपमा आफ्नो जिम्मेवारीका साथै सामाजिक कार्यमा दत्तचित भएर सधै क्रियाशील हुने व्यक्ति झरेन्द्र खरेल । साबिक तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ … Read More
जन्मथलोलाई कर्मथलो बनाउँदा …
बालाराम खड्का दाङ । काठमाडौं बस्दै गर्दा क्यानडा जाने सोच थियो । त्यसको लागि मैले तयारी पनि गरेको थिए । त्यो सफल भएन । २०७२ सालको भूकम्पले काठमाडौंबाट मलाई दाङ … Read More
मेरो खुशीः स्वर्ण जित्दा…
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि रोल्पाबाट भर्खर दाङ झरेको थिएँ । घोराहीमा रहेको महेन्द्र वहुमुखी क्याम्पसमा आइएमा भर्ना भएको थिएँ । कलेज आउने जाने समय चलिरहेको थियो । कलेजको खाली समयमा … Read More
मेरो खुशी : सेमिफाइनल गेम जित्दा …
लिलाधर वली देवेन्द्रसिंह ठकुरी क्रिकेटका धेरै गेम खेलेका छन् । कति गेममा खेलाडी बनेर खेलेका छन् त कति गेममा कप्तानी समेत गरेका छन् । खेलको दौरानमा उनले कोचको भूमिका समेत … Read More
मेरी आमा नै मेरो खुशी …
बालाराम खड्का दाङ । म गर्भमै थिएँ । बुबाको मृत्यु भएको २ महिनापछि म यो संसारमा आएँ । मेरी आमाले हामीलाई हुर्काउनुभयो, बढाउनु र पढाउनुभयो, राम्रो सत्कार दिनुभयो । मेरी … Read More
जुनवेला म बगरमा उत्रेको थिएँ …
गते मलाई याद भएन, सायद भदौ महिनाको दोस्रो साता वि.सं २०४८ साल । वातावरण चर्को थियो, भदौरे गर्मी । हामी हापुर खोलाको बगरमा ग्वाला गएका थियौं । गाईवस्तु चराउन जाने … Read More
‘नेविसंघको क्षेत्रीय अध्यक्ष’
त्यो वेला मैले प्यूठान जिल्लाको ओखरकोटस्थित बालशिक्षा मावि मच्छिमा अध्ययन गर्दै थिएँ । कक्षा ९ मा पढ्दै गर्दा मेरो राजनीतिक झुकाव बढिसकेको थियो । त्यसै प्रसंगमा मैले नेपाल विद्यार्थी संघको … Read More
मेरो खुशीः शिक्षा क्षेत्रको उन्नयनमा लाग्दा
दाङ,७ कार्तिक । विद्यायलय होस वा संघ, संस्था र अन्य सामाजिक कामदेखि राजनीतिकसम्म सधै सक्रिय र क्रियासिल व्यक्ति हुन तुलसीपुर –४ रक्षाचौर निवासी सुरेन्द्रबहादुर खड्का । उनका खुसीका पलहरु सोधदै … Read More